2017 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
အိပ်နေရင်း သေသွားတယ် ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ
ည ည အိပ်​​ပျော်​ ​နေရာက ဆီးသွားချင်စိတ်ကြောင့်​ နိုးလို့ ဘဲဖြစ်​ဖြစ်​ နံနက်​​စော​စော အိပ်​ရာ အထမှာ ဖြစ်​ဖြစ်​ လူတိုင်း *မိနစ်​ဝက်​ သုံးကြီမ်​ သတိထား* ခြင်းဖြင့်​ ရုတ်​တရက်​ ​သေဆုံးမှု များစွာ ​လျော့ပါး မှာပါ။
သာမာန်​အားဖြင့်​ ကျန်းမာ​ရေး​ ကောင်းတယ်​ လို့ ထင်​ရတဲ့ သူတစ်​​ယောက်​​ ညက ကွယ်​လွန်​ သွားပြီ ဆိုတာမျိုး၊ ဟင်​’ မ​နေ့က ဘဲ ​ဖေ့စ်​ဘွတ်​ မက်​စင်​ဂျာ က​နေ စကား​ပြောလိုက်​​ရသေး ခု ရုတ်​တရက်​ ​သေဆုံးပြီ ဆိုတာ မျိုး​တွေ မကြာမကြာ ကြားကြား​ နေရတာ ဘာ​ကြောင့်​ပါလဲ ၊
မြန်မာနိုင်ငံတွင်၊ လွတ်လပ်ရေးရအပြီး၊ သုံးလမျှမပြည့်တတ်သေးမီမှာပင်၊ ညီအကိုချင်း၊ စစ်ခင်းကြရသည့် ပြည်တွင်းစစ်ကြီးနှင့် တိုးခဲ့ရသည်မှာ အားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ နှစ်ပေါင်း (၇၀)နီးပြီဖြစ်သော၊ အဆိုပါ ‘ချသမိုင်း’ ကြီးအတွင်း၊ အဖွဲ့အစည်း တဖွဲ့စ နှစ်ဖွဲ့စလောက်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး အရယူနိုင်ခဲ့သည်များ ရှိသလောက် ရှိပါသည်။ ၁၉၅၈ ခုနှစ်က ‘ပြည်သူ့ရဲဘော်ပါတီ’၊ ‘မွန်ပြည်သူ့တပ်ဦး’၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်က၊ ‘ကရင်တော်လှန်ရေးကောင်စီ’ စသည်တို့နှင့် ဖြစ်သည်။ သို့နှင့်တိုင်၊ ယခုလို တော်လှန်ရေးအင်အားစု တော်တော်များများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပြီးသကာလ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၏ အခြေခံမူအချို့ကို အရယူနိုင်ခဲ့သည် မှာကား၊ ပထမဆုံးအကြိမ်ပင်ဖြစ်သည်။
၆ နှစ် အရွယ် ကောင်မလေး နဲ့ ၄ နှစ်အရွယ်ကောင်လေး မောင်နှမနှစ်ယောက် ကမ်းခြေကနေဆော့ပြီး အိမ်ကိုလမ်းလျှောက်ပြန်လာကြတယ်။ ကောင်လေးက ရှေ့ကလျှောက်ရင်း သူ့အစ်မ မပါမှန်း သိလို့ နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ ကောင်မလေးက အရုပ်ဆိုင်ရှေ့မှာ အရုပ်ကလေးတွေကို ငေးနေတယ်။
ဒါနဲ့ ကောင်လေးက အစ်မ အဲဒီအရုပ်ထဲက ဘယ်အရုပ်ကို သဘောကျလို့လဲ။ ကောင်မလေးက သူကြိုက်တဲ့ အရုပ်တစ်ရုပ်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ်။ ကောင်လေးက တကယ့်အစ်ကိုကြီး အမူအရာနဲ့ ကောင်မလေးလက်ကို ဆွဲပြီး အစ်မကိုဝယ်ပေးမယ် လို့ပြောလုက် တယ် ။ ကောင်မလေး အရမ်းပျော်သွားတယ်။ သူတို့ မောင်နှမ နှစ်ယောက် ပြောနေတာကို အရုပ်ဆိုင်ပိုင်ရှင်က ကြည့်ပြီး သဘောကျနေတယ်။
ဒါနဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး အရုပ်ဆိုင်ထဲကို ၀င်လာတယ်။ ကောင်လေးက အရုပ်ကို လက်ညိုးထိုးရင်းမေးလိုက်တယ်။
အဲဒီအရုပ်ရဲ့ တန်ဖိုးက ဘယ်လောက်လဲ?
“ဒကာကြီး ကျောင်းကို ခဏခဏ လာနေရတာ ပင်ပန်းပါတယ်။ အပြီးပဲ သာသနာ့ဘောင်ကို ဝင်လိုက်ရင် ကောင်းမယ်ထင်တယ်”
ဦးဇင်းလေးက ကျီစယ်မှုတွေ မလုပ်စဖူးလုပ်လိုက်လို့ အံ့အားသင့်သွားမိတယ်
“တပည့်တော်က သာသနာ့ဘောင်ဝင်ရင်လည်း ရဟန်းမြတ်တွေလိုပဲ နေထိုင်ကျင့်ကြံချင်တာဘုရား။ အရှင်ဘုရားတို့ ဝိနည်း သိက္ခာပုဒ်တွေကို အားလုံးမလိုက်နာနိုင်ဘဲနဲ့တော့ သာသနာ့ဘောင်ထဲဝင်လာပြီး အမှိုက်မဖြစ်ပါရစေနဲ့ဘုရား”
“သာဓု … သာဓု … သာဓုပါ ဒကာကြီး။ ဘယ်မှာနေနေပေါ့နော် … ကိုယ့်အပေါ်ကိုတော့ စိမ်းညှီတဲ့ အနံ့တွေ မဖုံးစေနဲ့ ဒကာကြီး။ စိမ်းညှီနံ့ကင်းအောင် ကြိုးစား”
“အရှင်ဘုရား …. ထူးဆန်းလိုက်တာ … စိမ်းညှီအနံ့ဆိုတာ ဘာကို ဆိုလိုပါသလဲဘုရား”
“ဒကာကြီးကို ဘုရားရှင်ခေတ်က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခု ပြောပြချင်တယ်”
Author: lubo601 | 10:08 PM | 1 Comment |
ပိပိရိရိ နေတယ် ။
လိမ်ညာ ပြောတယ် ။
သူထင် မြင်ရာ ကို အလောတကြီးပြောတယ် ။
သိုသိုသိပ်သိပ် အကွက်ချ ပြောတယ် ။
[ ကျော်ဝင်း ]
နိုင်ငံတကာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများကို၊ ပြန်ကြည့်လိုက်လျင် ‘ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်’ (right to secede) ကို၊ တရားဝင် ခွင့်ပြုထားသည့် နိုင်ငံဆို၍၊ ယ္ခင် ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၊ ယူဂိုဆလပ်ဗီးယားနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ၁၉၄၇ အခြေခံဥပဒေတို့သာ ရှိမည်ထင်ပါသည်။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံနှင့် ယူဂိုဆလပ်ဗီးယားတို့မှာ ယခုအခါမရှိတော့ပါ။ ဆိုဗီယက်ယူနီယံပြိုကွဲပြီး၊ နိုင်ငံသစ်များ ပေါ်ထွက်လာချိန်မှာ၊ ဆိုဗီယက်တို့၏ အိုင်ဒီအိုလိုဂျီ လက်သီးဆုပ်ပြေကျချိန်ရောက်တော့မှ ဖြစ်သည်။
အဲဒီအဖွားနာမည်​က ​ဒေါ်ဝိုင်း လို့​ခေါ်တယ်​..
တင့်​​တောင့်​တင့်​တယ်​ ​နေနိုင်​တဲ့သူ ​တောသူ​ဌေး​ပေါ့​လေ..
လွန်​ခဲ့တဲ့ နှစ်​​ပေါင်း ၃၀ ၀န်းကျင်​က သူ့အိမ်​ဟာ
ကျွန်​​တော့်​ နယ်​မြို့​​လေးရဲ့ အလှဆုံးနဲ့ ပထမဆုံး​သော တိုက်​အိမ်​ပဲ..
တစ်​မြို့လုံးကလူ​တွေ အထူးအဆန်းလုပ်​ပြီး သွားကြည့်​ကြတာကို
သူ့မှာ ​မောင်​မိုးနဲ့ မ​အေးဆိုတဲ့ သားသမီးနှစ်​​ယောက်​ရှိတယ်​..
စီးပွား​ရေး​လေးက အတန်​ငယ်​​ပြေလည်​​တော့ သားနဲ့သမီးကို
မှန်အောင် မပြ နိုင်သူတွေ ။
အမေ နှမ မစာနာ
ရာဂတဏှာ ရွပိုးထိုးသူတွေ ။
ခရီရေးတစ် (Creative) ဆိုပြီးတော့ ပြောနေတော့ ခရီရေးတစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့မေးကြည့်မိတယ်
“ဖန်တီးနိုင်စွမ်းပေါ့” တဲ့။ လွယ်လွယ်လေး ပြောလိုက်တာ။ ဖန်တီးတာအမျိုးမျိုးရှိတာပဲ။ ဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းသလိုမျိုးလား
“relating to or involving the use of the imagination or original ideas to create something.” လို့ အင်္ဂလိပ်လို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်။
ကိုယ်ပိုင်အတွေး၊ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူး၊ ကိုယ်ပိုင်အားထုတ်မှုနဲ့ ဖန်တီးနိုင်တာမျိုးပါ။ ဆရာတွေ ဆရာမတွေက ဆိုလို့ ပြောလိုက်ရင် ဆို၊ ဖတ်လို့ပြောလိုက် ဖတ်၊ ရေးလို့ ပြောလိုက်ရင် ရေး၊ ကျက်လို့ ပြောလိုက်ရင် ကျက်၊ မှတ်လို့ ပြောလိုက်ရင် မှတ်၊ အဲဒါ ခရီရေးတစ် မဟုတ်ပါ။
ရှင်းရှင်းပြောရရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ပညာရေးစနစ်ဟာ ခရီရေးတစ်ဖြစ်လာအောင် လုပ်ပေးနေတဲ့ စနစ် မဟုတ်သေးပါ။ ကလေးတွေကို ခရီရေးတစ် ဖြစ်လာစေချင်ရင် မိဘတွေရဲ့ တာဝန်ဖြစ်နေပါသေးတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က မိန်းကလေးတွေဟာ ထိုင်ရင် ထရင် ခါးပေါ်တာကို ရှက်ကြတယ်။ ဖုံးကြဖိကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကာလသားခေတ်ကျတော့ ခါးပေါ်တာ ရှက်စရာမဟုတ်တော့ဘူး။ မပေါ်တပေါ်တောင် ဖော်ဝတ်လာကြတယ်။ သို့သော် အတွင်းခံ ပေါ်တာကတော့ မကောင်းဘူး, ရိုင်းတယ်, ရှက်စရာ လို့ သဘောထားကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့ အခုခေတ်ကတော့ အတွင်းခံကို ဖော်ဝတ်နေကြပါပြီ။ အတွင်းခံ ဟာ သစ်လွင်နေဖို့ လိုလာပြီ။ တံဆိပ် ဂရုပြုရပြီ။ အရောင် အဆင်တောင် ကိုယ့်အသားနဲ့ ကိုယ့်အဝတ်အစားနဲ့ ကိုက်အောင် ရွေးဝတ်နေကြရပြီ။
အရင်တချိန်က ရှက်ဖွယ်, ရိုင်းတယ် ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်တွေဟာ ဒီနေ့မှာ ခေတ်မီတယ်, sexyကျတယ် လို့ သတ်မှတ်ခံနေရပြီ။ 'ဂျီစထရင်းကြိုး ဂျီစထရင်းကြိုး' တေးသံများနဲ့အတူ နှုံးစံ တန်ဘိုးများ ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်က အငြိမ့်တွေမှာ ပျက်လုံးများဟာ အညှီအဟောက် နည်းပါးပါတယ်။ ပါပေမယ့် နည်းတယ်။ ပါတဲ့ ပျက်လုံးတွေကလည်း တအားမရင့်သီးဘူး။ မိသားစုအတူထိုင်ကြည့်လို့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Author: lubo601 | 10:53 PM | 1 Comment |
နေပူထဲကနေ ဖြတ်သန်းလာရတဲ့သူတွေအတွက် အရိပ်ကို တောင့်တကြပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းထဲမှာ ထိုင်ပြီးတော့ ကြည်နူးမှုကို ယူနေမိတယ်။ ဘတ်စ်ကားစီးလာရတဲ့ ဒုက္ခတွေ အားလုံး မေ့ပျောက်သွားတယ်။ ဦးဇင်းလေးက စာသင်နေတယ်။ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာနဲ့ ဟောပြောပို့ချနေတာတွေကို တစ်လုံးချင်း နာခံနေမိပြီးတော့ သာဓုခေါ်နေမိတယ်။
“ဒကာကြီး ရောက်နေတာ ကြာပြီလား”
“ကြာပါပြီဘုရား … အရှင်ဘုရားမှာထားတဲ့ ဆရာတော် ဦးဗုဓ်စာအုပ်လာပို့တာပါဘုရား”
“အရှင်ဘုရား … မဟုတ်တာ လုပ်နေတာကို မြင်ပြီးတော့ မပြောတာ အပြစ်ရှိသလားဘုရား”
“ကားပေါ်မှာ ငွေလေး ၁၀၀ ကျပ်ကို ပုံးထဲမထည့်ဘဲ စီးနေကြတာကြည့်ပြီး စိတ်ပျက်မိလို့ပါဘုရား”
နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကို မှန်းဆကြည့်မြင်တဲ့အခါမှာ ကိုယ်တို့ဘိုးဘွားများကတော့ ကောင်းကင်ပေါ်က နေလနက္ခတ်တာရာ ဂြိုလ်စီးဂြိုလ်နင်းများနဲ့ တွက်ချက်ဆင်ခြင်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဥပမာ “သောကြာကြယ်ကြီး လနှင့်နီး ပြည်ကြီးပျက်လတ္တံ့” တို့ “လကိုကြယ်ဖောက် ဂျပန်ရောက်၊ ရောက်သည့်ဂျပန် သုံးနှစ်ခံ” တို့၊ ဘာတို့ပေါ့။ ဒါတွေက လက်တွေ့တော့မကျပေမယ့် သူ့ခေတ်သူ့အခါနဲ့ ယုံတမ်းစကားတွေ ဖြစ်ခဲ့တာတော့ အမှန်ပါပဲ။ အတိတ်တွေ တဘောင်တွေဆိုတာ မြန်မာရှင်ဘုရင်တွေခေတ်ကတည်းက သဘင်သည်ပါးစပ်၊ သူရူးပါးစပ်၊ ကလေးပါးစပ်ဖျားကနေ စနည်းနာ ခဲ့ကြရတာ မဟုတ်လား။
Author: နော်မန် | 10:50 PM | No မှတ်ချက် |
ပန်း, လငယ်, စမ်းတွေ မေ့စဉ်ပေါ့
Source By: http://nyeinsuu.blogspot.com
“အရှင်ဘုရား … တပည့်တော် တရားထိုင်ချင်ပါတယ်ဘုရား … နည်းလမ်းပေးတော်မူပါ”
စာဖတ်နေသော ဆရာတော်ကြီးက မော့ကြည့်လိုက်ရာ ကိုရင်လေးဖြစ်နေကြောင်း တွေ့လိုက်ရသည်။ ဆရာတော်ကြီးက
“ကိုရင် … ငယ်ပါသေးတယ် … စာသင်ပါဦး”
“စိတ်ကို တည်ငြိမ်အောင် လေ့ကျင့်ချင်လို့ပါဘုရား”
“အေး … ညကျတော့လာခဲ့”
ဆရာတော်ကြီးကို ဝတ်ပြုပြီး ကိုရင်လေးထွက်သွားသည်။ ညအချိန်တွင် ကိုရင်လေးက ဆရာတော်ကြီးရှေ့ကို ရောက်လာပြီး ဝတ်ပြုသည်။
ကြောင်နဲ့ ဝက်က သူငယ်ချင်းတွေ။
တစ်နေ့ သူတို့နှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်လာရင်း ကြောင် က မုဆိုးထောင်ထားတဲ့ ကျင်းကြီးထဲ ပြုတ်ကျသွားတယ်။
ကြောင်က ဝက်ကို ကြိုးပစ်ချခိုင်းတယ်။
ဝက်က ကြိုးအခွေလိုက် ပစ်ချပေးလိုက်သည်။
"နင် ဒီလိုပစ်ချတော့ ငါက ဘယ်လိုတက်လာရမလဲ.. " တဲ့
Author: နော်မန် | 5:07 PM | No မှတ်ချက် |
Author: နော်မန် | 5:04 PM | No မှတ်ချက် |
အရေးဟဲ့ဆို ... ပျောက်ပြီ။
တိမ်မှင်ရည်ရုပ် ... ဟန်တွေလုပ်
Author: နော်မန် | 5:02 PM | No မှတ်ချက် |
... အလို ... ဒီရာသီပေါ့
ကုလားထိုင်တွေ စိုက်ပျိုးလို့ ကောင်းတဲ့ရာသီ
လှည်းကျိုး ထမ်းရတော့မယ့် ရာသီ။
ခပ်ပျင်းပျင်း ... ထိုင် ...
အိပ်ရေးမ၀သေးတဲ့ ၀က် ၀၀ကြီးလို
ဟိုး ... ဆရာ ... ဟိုး ... ဟိုး ...
ကုလားထိုင် စိုက်ပျိုးပင်တွေ ကြဲထားတယ်။
Author: နော်မန် | 5:00 PM | No မှတ်ချက် |
Author: နော်မန် | 4:57 PM | No မှတ်ချက် |
-တကယ်တော့ - ကျွန်တော်ဟာ
မခင်သီက-ဧရာဝတီရဲ့အလှအပအကြောင်း ပြောပြနေတော့ ...။
-အိပ်ပါရစေတော့ - မခင်သီ
ကျွန်တော့်ဆိုမှာ - မနေဘူးလေ။
ဧရာဝတီဆီ - ချီတက်ရအုံးမယ်။
ပုဂံပြည်ဆီ - ချီတက်ရပါအုံးမယ်၊
မန္တလေးနန်းမြို့ဆီ - ချီတက်ရပါအုံးမယ်။
-ချီတက်ကြပါအုံးစို့ - မခင်သီ။ ။
ကေးကေးဇံ (၃၁ ၊ ၅ ၊၉၂)
Author: နော်မန် | 11:04 AM | No မှတ်ချက် |
မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနား ပြည်နယ် Mecklenburg County Sheriff's Office က ထုတ်ထားတဲ့ ကိုထွန်းလုံစိန် ဓာတ်ပုံ။
အမေရိကန် လေကြောင်း (AA) ပိုင် လေယာဉ်နဲ့ လိုက်ပါလာတဲ့ ခရီးသည် တဦးဟာ ကြာသပတေးနေ့က မြောက် Carolina ပြည်နယ်က Charlotte Douglas နိုင်ငံတကာ လေဆိပ်မှာ လေယာဉ်ပျံတက်ဖို့ ပြင်နေစဉ်မှာပဲ လေယာဉ်မယ်ကို ကိုက်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပြီး လေယာဉ်ပေါ်ကနေ ခုန်ချထွက်ပြေးခဲ့တဲ့ အတွက် သူ့ကို ဥပဒေချိုးဖောက်မှုနဲ့ လေကြောင်း တာဝန်ရှိသူတွေက ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းလိုက်ပါတယ်။
သူဟာ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဒေသက ကရင်လူမျိုးတဦး ဖြစ်ပြီး နာမည်က ကိုထွန်းလုံစိန် Tun Lon Sein ဖြစ်ပါတယ်။
သူဟာ အင်္ဂလိပ်စကား သိပ်မပြောနိုင်တဲ့ အတွက် သူဘာကြောင့် အခုလို လုပ်ရတယ်ဆိုတာ မသိသေးဘူးလို့ အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။ သောကြာနေ့မှာ တရားရုံး ထုတ်ဖို့ လုပ်ခဲ့ပေမယ့် ကရင်စကားပြော စကားပြန် မရသေးတဲ့ အတွက် သူ့အမှုကို ကြားနာမယ့် ရက်ကို ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ တယ်လို့ CNN သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
သူဟာ CRJ 200 ဂျက်လေယာဉ် အမျိုးအစားနဲ့ အမေရိကန် လေကြောင်း ခရီးစဉ် အမှတ် 5242 မှာ လိုက်ပါလာသူ ဖြစ်ပြီး လေယာဉ်က ပြေးလမ်းပေါ် တက်ဖို့ လုပ်နေချိန်မှာ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ သူဟာ ထိုင်နေရာကထ လေယာဉ် တံခါးမကြီးဆီ သွားပြီး ဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားချိန်မှာ လေယာဉ်မယ်က တားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ကျန် ခရီးသည် ၂ ဦးကလည်း သူတို့နေရာ ကနေ ထလာပြီး ကူညီခဲ့တာပါ။
သူဟာ လေယာဉ်မယ်ကို ကိုက်ဖို့ ကြိုးစားပြီး တံခါးပေါက် တခုကနေ လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ် ခုန်ဆင်း သွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကို လေဆိပ်ဝန်ထမ်း တွေက ဝိုင်းဖမ်းပြီး ဆေးရုံ ပို့ခဲ့ကြတာပါ။ သူဟာ အမေရိကန် နိုင်ငံထဲကို နယူးဂျာစီ ပြည်နယ် Newark လေဆိပ်ကနေ ဝင်ရောက်လာသူဖို့ အခု Charlotte လေဆိပ်မတိုင်ခင် လေယာဉ် ၂ ဆင့် ပြောင်းပြီး စီးခဲ့ရတာမို့ လေယာဉ်ပျံ စီးသူတွေ လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေ သူသိပြီးသားလို့ အာဏာပိုင်တွေ ယုံကြည် ကြပါတယ်။
အမေရိကန် လေကြောင်းလိုင်း ကတော့ ခရီးသည်တဦးရဲ့လုံခြုံရေး ဆိုင်ရာ ဖြစ်ရပ်တခုလို့ ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့ပြီး လေယာဉ်ဟာ မူလ ဂိတ်ကို ပြန်မောင်းခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလေယာဉ်အတွက် ပြန်လည် စစ်ဆေးမှုတွေ အပြီး မြောက် Carolina ပြည်နယ် New Bern ကိုဆက်သွား ရတဲ့ ခရီးစဉ်ကို နောက် တနာရီခွဲ နောက်ကျပြီး ထွက်ခွာ နိုင်ခဲ့တယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်။
သူ့ရဲ့ လေယာဉ် ဝန်ထမ်းတွေကို နှောက်ယှက်မှု အတွက် နောက်ရုံးချိန်းက ဇွန်လ ၁ ရက် ကြာသပတေးနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။
နားဆင်ရန် -> http://burmese.voanews.com/a/3874266.html
Source By: http://burmese.voanews.com
Author: နော်မန် | 10:20 AM | No မှတ်ချက် |
** Easy talk-1
အင်္ဂလိပ် စကားပြောတဲ့ အခါ သိပ်ပြီး ကြီး ကြီး ကျယ်ကျယ် စကားလုံး တွေ သုံး ဖို့ မလို ပါဘူး ၊
ပြောပုံ ပြောနည်း နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။
to talk to the point အချက်ကျကျပြောဆိုသည်။ to talk through one's heart ရောက်တတ်ရာရာပြောဆိုသည်။
ပြောလေ့မရှိသေးသူများ အတွက် to talk the point ကိုသာ ဦးစွာ သုံး သင့်ပါတယ်။
တခြား လူ နားလည်အောင် ပီပီသသ နဲ့ စနစ် တကျ ယဉ်ယဉ် ကျေးကျေး ပြောတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
တခါတလေ ပြောချင်တဲ့ စကား ကို စကား လုံး လဲ မသိ ဘဲ မေ့နေတတ်တော့ အရင်ဆုံး နေ့ စဉ် သုံးနေကျ
ဝေါဟာရတွေ ကို တော့ ဦး စွာ လေ့လာ ထားနိုင် ရင် ပို ကောင်း ပါတယ်။
အခြေခံ ပြောနိုင် ရင် ကို ဘဲ တစ် ကမ္ဘာ လုံး နဲ့ ပြောလို့ ရပါပြီ။
ဒီတစ်ပတ်တော့ အခြေခံ talking and Chating လေး တွေ ကစပြီး ပြောကြည့် ကြမယ် ။
Chating မှာ လဲ သုံး လို့ ရပါတယ်။
တခါမှ မတွေ့ ဆုံ ဘူးတဲ့ လူတွေ ကို စပြီး မိတ်ဆက် ခြင်း။
ယေဘူယျ မေးခွန်း များ။
ဒီလို ပြန်ဖြေနိုင် တယ်။ ပြန်ဖြေကြည့်ပါ။
ထုံးစံကတော့ နာမည် တစ်ခုကို မေးနေဘို့ မလိုပါဘူး။ ဒါဟာ သူတို့ ရဲ့ပြောသင့်တာ တစ်ဦးချင်းစီမှာ အဓိပ္ပာယ် သိပြီး သားပါ။ သို့ သော် သူတို့ မပြောခဲ့ ရင် ဒီလို ဘဲရိုးရိုးမေးပါ။
Learn English speaking much FASTER by Language Saga
If you see the person atarestaurant, you can say,
"Do you come to this restaurant often?"
Or at the movie theatre,
"What movie did you come to see?"
If asked what you have been up to, you can respond with,
"Same ole same ole." Or, "The same as usual."
Greeting - Example Conversations
Let's look at several example conversations. Then we can move on to the practice section.
Person A: "Hi, my name is Steve. It's nice to meet you."
Person B: "I'm Jack. It'sapleasure to meet you, Steve."
Person A: "What do you do foraliving Jack?"
Person B: "I work at the bank."
Person A: "What is your name?"
Person B: "Jackson."
Person A: "What was that again?"
Person A: "Hey John, how have you been?"
Person B: "Whatasurprise. I haven't seen you inalong time. How have you been?"
Person A: "I'm doing very well. How about you?"
Person B: "I finally have some free time. I just finished takingabig examination, and I'm so relieved that I'm done with it."
Person A: "Hi Nancy, what have you been up to?"
Person B: "The same ole same ole." Or, "The same as usual. How about you?"
Person A: "I'm pretty busy at work these days, but otherwise, everything is great."
Person A: "Andy, it's beenalong time, how are you man?"
Person A: "Do you come to this restaurant often?"
Person B: "I've been hereacouple of times, but I don't come onaregular basis."
The next lesson is the interactive practice section. If you would like to repeat this lesson or previous lessons, feel free to go back and study as many times as you need. When you are ready, go to the practice section.
Greeting - Interactive Practice
Speak English faster by downloading hundreds of NEW
Bored - Calling Someone
Bored - Boring Work
A different situation you can tell someone you are bored is when you are simply talking withafriend concerningapart of your life that is boring. For example, if you haveaboring job, you can explain to your friend how boring it is.
"How is your work these days?"
"Work is so boring that I'm going crazy."
"I ran out of things to do and management is too busy to give me more work. I tried to find things to do with no luck. I'm basically sitting in my chair pretending to work."
"Tell me about it. Time goes so slow when you're bored. I'd rather be busy. Then at least the day would go by faster."
Similar type of boring work is when doing something that is routine. Some sentences expressing boring work are:
"I'm doing the same thing over and over again."
"My work is so repetitious that I am getting bored of it."
"My work does not interest me."
"I'm only working to pay the bills."
Because some people are so busy, they envy people who have nothing to do at work.
"I'm so bored. I have nothing to do at work. I just surf the Internet all day long."
"Dang! I'm so busy at work, it's driving me crazy. I really wish I had your job."
Speak English faster by Language Saga
How is your day - Interactive Practice
A: "What are you doing now?"
B: "I'm watching TV."
B: "I'm watching Friends. What are you doing?"
A: "I'm doing my homework, but I really need to takeabreak."
B: "You want to do something?"
A: "Yes. But I shouldn't. I got to finish my assignment now."
B: "Alright. Call me later then."
A: "OK. Bye."
A: "Where are you going now?"
B: "I'm going to the bank."
A: "Aren't you supposed to be at work?"
B: "I'm working now. I'm makingadeposit for our company."
B: "I work forarestaurant asacontroller."
A: "Wow. That's great."
B: "Great seeing you. I have to go now. I'll talk to you later."
A: "Hi Steve. What are you doing here?"
B: "I'm meetingafriend here for dinner. How about you?"
A: "I'm on my way home but I needed to stop by the book store to buyatext book."
B: "Didn't you finish school yet?"
A: "I have one more year, and then I'm done."
B: "What are you majoring in?"
A: "I'm majoring in Sociology"
B: "How do you like your major?"
A: "I really find the subject very interesting. I'm enjoying all my classes."
B: "That's great."
A: "I better go now. I don't want to miss the bus."
B: "Aright, I'll talk to you later."
A: "Okay. See you later."
"I'm going to see Bob tomorrow"
"I'm going to meet John at the airport at6O'clock tonight"
"I'm going to go home in an hour"
"I'm going to go to the bus stop right after class"
"I'm going to do that tomorrow"
"I'm going to be dead if I don't finish this project by tomorrow"
"I'm going to go home next week"
"I'll meet you there at five"
"I can't go tonight because I have to work late"
General Things Review - Interactive Practice
A: "I haven't been to the Mall inalong time. Let's go."
Source By: http://laminngwesin.blogspot.com